MOMBA ANAY - Ozinina plastika Xishun
FILAZANA ACRYLIC MAZAVA
FIRAISANA ACRYLIC CLEAR EXTRUDED
FILAZANA ACRYLIC LOKONANA
FIRAISANA ACRYLIC COLOR EXTRUDED
FIRAISANA ACRYLIC ANTI-SCRATCH
FILAZANA ACRYLIC ANTI-FLAMING
FIRAISANA ACRYLIC DIFFUSER
TAPITRA ACRYLIC MIRROR
TARATASY ACRYLIC DECORATION
MARBRE ACRYLIC SHEET
FIRAISANA ACRYLIC GLITTER
LALANA HAFA ACRYLIC SHEET
Xishun Plastic Factory
Xishun Plastics dia naorina tamin'ny 1996, dia famokarana, varotra, fanodinana acrylic taratasy ho toy ny iray amin'ireo orinasa rehetra. Xishun plastika manana extrusion kilasy lovia famokarana orinasa, fanariana kilasy lovia famokarana orinasa sy ny acrylic dingana fanodinana orinasa, ny marika GARY, dia namidy tsara any amin'ny firenena 50 mahery sy ny faritra, ary lasa orinasa manan-danja ao an-trano PMMA lovia famokarana. Ny kalitao sy ny serivisy aorian'ny varotra dia noderaina sy eken'ny olona ao amin'ny indostria. Xishun Plastics dia manolotra teknolojia azo antoka sy traikefa amin'ny fitantanana ny famokarana any an-trano sy any ivelany. Ny tena vokatra dia PMMA taratasy (extrusion kilasy, fanariana kilasy), MMA monomer sy acrylic asa tanana, izay takelaka azo vokarina amin'ny fepetra arahana sy loko isan-karazany araka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Taorian'ny taona maro ny fampandrosoana, ny orinasa dia manaraka ny fotoana, manaraka ny fitantanana orinasa tanjona ny "mivelatra sy lalina, fandresena-fandresena fampandrosoana", hery ara-teknika matanjaka, miezaka ny ho velona amin'ny kalitao, miezaka ny fampandrosoana ny siansa sy ny teknolojia, ary miezaka ny hampandroso ny talenta. Ataovy ny orinasa hihazona fotoana tsara ny fampandrosoana eo amin'ny fifaninanana tsena. Mitombo isan-taona ny halehiben'ny orinasa, ary mitombo isan-taona ny tombony ara-toekarena.
Ny filanao, ny fahatsapanay! Mampanantena izahay: "serivisy mibanjina, vokatra tsara, vidiny manokana", mifikitra hatrany amin'ny tanjona "kalitao voalohany, mpanjifa voalohany", hanome anao vokatra tsara.
Ny fanitarana ny tsena no tanjonay, hanatsara ny haavon'ny serivisy izahay, hiezaka hamorona ny lanjan'ny vokatra, hanamafy ny fifandraisana, fiaraha-miasa amin-kitsim-po, fampandrosoana iombonana, ary hifanome tanana hamorona hoavy tsara kokoa.
Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 24 taona, XISHUN acrylic dia nahazo laza tsara ho an'ny matihanina sy ny kalitaon'ny vokatra. Raha misy ny fahafahana hiara-miasa amin'ny ho avy, XISHUN dia hatoky tena ho mpiara-miasa azo itokisana!
No.1 Dieshizhihekou, Yangda Rd., Lunjiao, distrikan'i Shunde, tanànan'i Foshan, Faritanin'i Guangdong
MISY MISY AMIN'NY 8 ora maraina ka hatramin'ny 18 ora alina
Adiresy: No.1 Dieshizhihekou, Yangda Rd., Lunjiao, distrikan'i Shunde, tanànan'i Foshan, Faritanin'i Guangdong
telefaonina: +86 0757 27886999